Monday, 03.30.2020, 03:23pm (GMT+5.5) Home Contact
विपद्बाट एक अर्बको क्षति, ९० हजार घर प्रभावित
Tuesday, 07.30.2019, 12:11pm
काठमाडौं । असार अन्तिम साता सक्रिय भएको मनसुनका कारण आएको अविरल वर्षापछिको बाढीपहिरो र डुबानले मुलुकका विभिन्न जिल्लामा यो समाचार तयार पार्दासम्म ११३ जनाको मृत्यु भएको छ । यस्तै ३८ जना बेपत्ता भएका र ६७ जना घाइते भएका छन् । असारको २६ देखि ३० गतेसम्म अविरल वर्षासँगै बाढीपहिरो र डुबान भएको थियो । साउनको ६ र ८ गते पनि पहिरो र बाढीले विभिन्न क्षेत्रमा क्षति पु¥याएको थियो ।
Monday, 07.22.2019, 05:39pm
डुवानको नियतिः सधैँको सन्त्रास
यो वर्ष पनि आसारको अन्तिम हप्ता देशका विभिन्न भागमा भएको अबिरल वर्षाका कारण ९० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाए, ३० जनाभन्दा बढी अझै हराइरहेका छन् र घाइते हुनेहरूको सङ्ख्या पनि निकै छ । बाढी, पहिरो र डुवानमा परी विस्थापित हुनेहरूको संख्या दशौं हजार छ । लाखौं बिघा जमिनको खेतीबाली नष्ट भएको छ, दैनिक ज्यालादारी गरेर गुजारा गर्नेहरूको रोजीरोटी गुमेको छ । हरेक सालको वर्षायाममा सिर्जित हुने यस्ता संवेदनशील घटनाहरू नियमित आकस्मिकताकै रूपमा निरन्तर दोहरिँदै र थप विस्तारित हुँदैआएका छन् । चलनचल्तीको भाषामा बाढी, पहिरो र डुवानलाई प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी प्रकोप भनेर मानव सिर्जित समस्याका मुहानहरूको ढाकछोप गर्ने बञ्चनीय प्रवृति पनि यथास्थितिमा नै छ ।
नेवानिको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिने तयारी नेपाली असक्षम कि राजनीतिक स्वार्थ ?
Monday, 07.22.2019, 05:38pm
लामो समयदेखि संकटमा परेको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन विदेशीलाई दिने तयारी गरिएपछि अनेक प्रश्न उठेको छ । के नेपालमा वायुसेवा व्यवस्थापन गर्ने विज्ञ नै छैनन् त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ र यसको उत्तर पनि सजिलै छ– नेपाली सक्षम नभए निजी विमान कम्पनी कसरी चले ?
आज (साउनको ७ गते) नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको देहावशान भएको दिन । त्यस्तै हिजो ६ गते नेपाली कांग्रेस पार्टीका संस्थापक नेता वी.पी. कोइराला दिवंगत भएको दिन । संयोग पनि कस्तो ? दुई विपरित दर्शन सिद्धान्त विचारका महान् नेताको भौतिक अवशान अघिल्लो र दोस्रो दिन स्मृति दिवस मनाउने गरी परेको ।
साउन १६ देखि कांग्रेसको प्रशिक्षण
Monday, 07.22.2019, 05:37pm
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सातै प्रदेशमा पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरेको पर्यटन वर्ष २०२० लाई लक्षित गर्दै नारायणी नदीमा रिभर क्रुजसिप (मिनी पानीजहाज) दशैं अगाडि नै सञ्चालनमा आउने भएको छ । क्रुज सञ्चालन गर्ने राइनो वाटर इन्टरटेन्मेन्ट प्रालिले शनिबार चितवनमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी दशैँ अगाडि क्रुज सञ्चालनमा ल्याइने जानकारी दिएको हो ।
Monday, 07.22.2019, 05:35pm
हालसालै काठमाडौँको डल्लुुलगायत केही स्थानमा अनौठो प्रकृतिको दुुई घटना भए । एक युवतीलाई किला घोप्ने र अर्काे युवतीलाई देख्ने बित्तिकै गुप्ताङ्ग देखाउने । यसलाई सामाजिक अराध मानिए पनि यसको उपज भने मानसिक रोग भएको विश्लेषण छ ।
Monday, 07.22.2019, 05:34pm
परराष्ट्रमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य प्रदीपकुमार ज्ञवाली दम्पतीले आफ्ना शरीरका विभिन्न अङ्ग मृत्युपपछि जुनसुकै बिरामीलाई प्रत्यारोपण गर्नेगरी अङ्गदानको घोषणा गरेको छ ।
Monday, 07.22.2019, 05:33pm
» थोरङ्लामा हक्की खेलेर बन्यो विश्व कीर्तिमान
» महिला सांसदले राष्ट्रसँग माफी माग्नुपर्छ- ट्रम्प
» युगसम्वाद ३२औं वर्षमा प्रवेश
» सरकार फेरबदलको खेल चलेकै हो त ? - गुठी विधेयकको विरोधले सरकारलाई गलायो !
» जनता अरिङ्गाल हुन्– धेरै नजिस्क्याउ !
» सडकमा उत्रेका लाखौंजन ‘सामन्ती’ हुन् ? - यादब देवकोटा
» मौलिक संस्कृतिको जगेर्ना होस्
» सन्दर्भ : नागरिकता विधेयकको “रक्तं जीव इति स्थिति”- वेदराज पन्त
» ट्राफिक छैन भनेर आँखा छल्दैमा पाइँदैन सुख... आउँछ फोन
» आइएलओ नेपालमा लागू हुने सन्धि नै हैन - महेश्वर शर्मा
» सिद्धार्थको क्रिडास्थल ओझेलमा
» गुठी विधेयकका बारेमा सरकारी प्रवक्ताको यस्तो भनाई
» एसइईको परीक्षाफल असार दोस्रो एसइईको परीक्षाफल असार दोस्रो
» वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकाहरु यसरी ठगिन्छन्
» देशको परिस्थिति अनपेक्षित दिशातिर उन्मुख - सत्ता राजनीतिक वृत्तभित्र चर्को अन्तर्विरोध
Page 7/118: « :: ...4567 8910 ... :: »